Banyere Anyị - GuangDong Deshion Industry Co., Ltd
GuangDong Deshion Industry Co., Ltd bụ onye nwe ya kpamkpam nke Guangdong Dongsen Metal Doors na Windows Co., LTD, yana nke a maara nke ọma dị ka onye nrụpụta zuru oke nke na-enye ọnụ ụzọ na windo, sistem facade enyo, ụgbọ okporo ígwè yana nhazi ígwè.
Ụlọ ọrụ anyị dị na Zhongshan, China, nke dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen na Guangzhou.The osisi na-ekpuchi ebe 35,000 square mita na ekesịpde 400 ọrụ & ahụmahụ engineering otu.Anyị nwere nnukwu akpaka ngwaike elu ọgwụgwọ mmepụta akara, gụnyere akpaka degreasing, nchara mwepụ, spraying na dum akara bụ 450 mita ogologo.Anyị abụghị naanị onye na-eweta ngwaahịa ọkachamara, mana onye na-arụ ọrụ injinia ọkachamara, nwere ọkachamara na mgbidi mkpuchi iko, Alu.windows na ọnụ ụzọ, usoro igwe, ụdị ụgbọ oloko dị iche iche, yana njikwa arụmọrụ nke ọrụ dị iche iche site na atụmatụ → nha saịtị → imepụta → mmepụta → ntinye.
Iji nye ngwaahịa na ọrụ dị elu maka ndị ahịa si mba ofesi wee bụrụ ụlọ ọrụ pụtara ìhè.
Anyị ụlọ ọrụ e gbaara dị ka mba High-tech enterprise na site ISO, CE & SGS iru eru asambodo.N'ime afọ 13 gara aga, ngwaahịa na ọrụ anyị ejirila otuto na ekele maka ụlọ ọrụ mmepe ụlọ nke China TOP10 dị ka ogige obodo, Sunac, Agile Property, wdg.Ọzọkwa ọnụ ahịa mmepụta kwa ọnwa karịrị nde dollar US anọ.N'iburu n'uche maka ahịa siri ike na mba ofesi, ụlọ ọrụ ahụ chọkwara ibupụ usoro ngwaahịa ya na ika ya, ma mepụta usoro nkwado nke abụọ maka mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ụlọ ọrụ Guangdong Deshion ga-aga n'ihu na-enye ngwaahịa na ọrụ dị elu ahaziri iche maka ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ na echiche nke "ihe ọhụrụ teknụzụ, imekọ ihe ọnụ n'ọdịnihu".
1. Na-eme ka enweghị afọ ojuju dị mma na ahụike na ọnọdụ dị ugbu a.
2. Oku sitere na oke ochicho na echiche nke ozi.
3. Na-achụso ihe ịga nke ọma na-adigide ogologo oge.
4. Mmụọ nke obi ike ọnụ ọhụrụ elu.
5. Ịdabere na ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ịchụso ịdị mma.
1. Kwesịrị ntụkwasị obi na òkè.
2. Soro na-arụsi ọrụ ike na ịrụkọ ọrụ ọnụ.
3.Ngwa okwu na nsonye zuru oke.
4. Zụlite ma kesaa.
5. Ebumnuche na imekọ ihe ọnụ.
1. Nabata mgbanwe ma too nke ọma.
2. Mụta nke ọma ma na-akwado ezi obi.
3. Were ọrụ ma soro ndị ọzọ na-akpakọrịta.
4. Nhazi onwe onye ma mepụta mgbanwe.
1. Nkà na ụzụ ọhụrụ, njikarịcha na-aga n'ihu.
2. Nọgidenụ na-akawanye mma na ime mgbanwe maka mgbanwe.
3. Mepụta ma nabata mgbanwe.
4. Imekọ ihe ọnụ na ihe ọhụrụ, na-eduga n'ọdịnihu.